UCarl Ritter - uMsunguli waseJamani weJografi
Ijografi yesiJalimane uCarl Ritter udla ngokuxhomekeke kuAlexandro von Humboldt njengomnye wabasunguli belijografi zanamhlanje . Nangona kunjalo, abaninzi bayamkela imirhumo yeRitter kwiinkqubo zanamhlanje ukuba zingabalulekanga kangako kunezo zakwa-von Humboldt, ngokukodwa njengomsebenzi wokuphila kaRitter esekelwe kwimibono yabanye.
Ubuntwana kunye neMfundo
I-Ritter yazalwa ngo-Agasti 7, 1779, e-Quedlinburg, eJamani (emva koko i- Prussia ), iminyaka elishumi emva kwe-von Humboldt.
Ngeminyaka emihlanu, uRitter wayenelungelo lokukhethwa njengengqayi ye-guinea ukuya kwisikolo esitsha sokuhlola esamnxibelelana nabanye abacinga kakhulu kwixesha. Kwiminyaka yakhe yokuqala, wafundiswa ngu-geographer JCF GutsMuth kwaye wafunda ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nokusingqongileyo.
Xa wayeneminyaka elishumi elinesibhozo, uRitter wakwazi ukuya eyunivesiti ngokufumana isifundo ngokubhalisela ukufundisa oonyana beebhanki abazizityebi. I-Ritter yaba ngumgijografi ngokufunda ukugcina ihlabathi elikujikelezile; Kwakhona waba ngcali kwiingqungquthela zemvelo. Wafunda isiGrike nesiLatini ukuze afunde ngokubanzi ngehlabathi. Ukuhamba kwakhe kunye nokuqwalasela ngokuthe ngqo kwakunyanzelekile eYurophu, wayengesiye umhambi wehlabathi u-von Humboldt.
Ngo-1804, eneminyaka engama-25, imibhalo yokuqala ye-Ritter, malunga neJografi, yapapashwa. Ngomnyaka we-1811 wanyathelisa incwadi yeencwadi ezimbini ezinomqulu malunga neendawo zaseYurophu.
Ukususela ngo-1813 ukuya ku-1816 uRitter wafunda "i-geography, imbali, i-pedagogy, i-physics, i-chemistry, i-mineralogy, kunye ne-botany" kwiYunivesithi yaseGottingen.
Ngo-1817, wanyathelisa umqulu wokuqala womsebenzi wakhe omkhulu, u- Die Erdkunde , okanye iNzululwazi yomhlaba (inguqulelo yesiJalimane yegama elithi "geography.") Injongo yokuba i-geography epheleleyo yehlabathi, i-Ritter yashicilela imiqulu engama-19, equle Amaphepha angama-20,000, ngaphaya kwendlela yokuphila kwakhe.
I-Ritter yayivame ukuquka i-theology kwimibhalo yakhe kuba wayechaza ukuba umhlaba ubonakalisa ubungqina besicwangciso sikaThixo.
Ngelishwa, wayekwazi kuphela ukubhala malunga ne-Asia ne-Afrika ngaphambi kokuba afe ngo-1859 (unyaka owodwa njengo-von Humboldt). Igama elipheleleyo, elide, elibizwa ngokuba yi- Die Erdkunde liguqulelwe kwiNzululwazi yomhlaba ngokubhekiselele kwiNdalo kunye neMbali yeLuntu; okanye, iJografi ngokubanzi ngokulinganisa njengeSiseko esiQinisekileyo seSifundo, kunye neNkcazelo, kwiSayensi zeMvelo neZembali.
Ngo-1819 uRitter waba nguprofesa wembali kwiYunivesithi yaseFrankfurt. Ngonyaka olandelayo, wamiselwa ukuba abe sisihlalo sokuqala sejografi eJamani-kwiYunivesithi yaseBerlin. Nangona iimibhalo zakhe zazivamekile kwaye zilukhuni ukuyiqonda, iintetho zakhe zazinomdla kwaye zithandwa kakhulu. Amahholo apho anika khona izifundo zazihlala zizele. Ngoxa wayenamanye amaninzi athile ngexesha elilodwa kulo lonke ubomi bakhe, njengokuba wasungula i-Berlin Geographical Society, waqhubeka esebenza kunye nokufundisa kwiYunivesithi yaseBerlin kwada kwafa ngoSeptemba 28, 1859, kuloo mzi.
Omnye wabafundi abadumileyo beRitter kunye nabaxhasayo abanomdla kwakunguArnold Guyot, owayenguprofesa wezendalo kunye ne geology ePrinceton (ngoko yiKholeji yaseNew Jersey) ukususela ngo-1854 ukuya ku-1880.
Cool Halloween Jack o Izibane
Imfazwe Yehlabathi II: M26
Ukuhlaziywa kwe-Hunter 140 I-Sailboat
UAdolf Hitler kwiNkcubeko: IziCatshulwa kwiMilinganiselo yokuziphatha
Admissions yeVyunivesithi yaseVermont
AbaPolitiki bezembali abazange niyazi ukuba nabo babekho